စနေလင်း| February 15, 2013 | Hits:4,041
| | သန်လျင် အလွမ်းဆွတ်ကျေးရွာရှိ သီလဝါ စက်မှုဇုန် စီမံကိန်း နယ်မြေ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ရွှေတော ရေကြီး မြေပြိုမှု သေဆုံးသူ ၃၆ ဦး အတည်ပြု၊ တရုတ်နိုင်ငံသားများလည်း ပါဝင်မိုးသည်းထန်၍ ကလော ရွှေတွင်း၌ လူသေဆုံးမှုဖြစ်စစ်တပ်ပိုင်သိမ်းထားသည့် မြေပေါ်တွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးမှု သတိပေးခံရလယ်ယာမြေ မှတ်ပုံတင်ရန် လယ်သမားများ အခက်ကြုံနေရမိုးမကျခင် အသိမ်းခံ လယ်များ ပြန်ပေးပါ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Sunshine February 18, 2013 - 2:37 pm	Compensation is not enough. Fair compensation is needed.
Reply	တခြားဖတ်စရာများ ပါတီဝင်များအား ပအိုဝ့်ပြည်သူ့စစ်များက ခြိမ်းခြောက်ဟု ရှမ်းပြည် NLD ပြော